Jikwaa otutu ihe omuma nke WordPress na Jikwaa | Martech Zone
Jikwaa otutu ihe nke WordPress na ManageWP
Mọnde, Jenụwarị 21, 2013 Douglas Karr
Anyị abanyela aka na 3 ndị ahịa WordPress ọzọ n'izu gara aga na ọchịchọ ahụ na-eto. Ka anyị na-aga n'ihu na jikwaa na nyochaa saịtị ndị ahịa anyị, oge eruola na anyị malitere ịchọ usoro iji nyere aka mee ka ọ rụọ ọrụ nke ọma. JikwaaWP bụ ihe jikọtara ọnụ na njikwa njikwa WordPress nke na-enye ndị ọrụ ike zuru oke na njikwa zuru oke na ijikwa ihe niile ọnụọgụ saịtị WordPress na ụzọ kachasị mfe.
Otu-pịa Access - Otu kensinammuo otu-pịa ohere jikwaa niile nke gị WordPress saịtị.
Nchịkwa Dị Mfe - Nyochaa saịtị saịtị WordPress nwere isiokwu na plugins chọrọ nlebara anya. Na otu pịa, a na-emelite plugins na gburugburu gị niile.
Nlekota oru - Site na ngwa nlekota oge elele, ị ga-ahụ na saịtị WordPress gị ga-aga n'ihu na-aga nke ọma ka azụmahịa gị wee nwee ike ịrụ ọrụ zuru oke. Ma ọ bụrụ na ihe adịghị nke ọma, ị ga-abụ onye izizi ga-ama.
Ihe ngosi okporo ụzọ - Ndi onye a ma ama jikọrọ gị? Ndi ozi gi ohuru abanyela oria? Ndi spam bots na-ebuso saịtị gị? Site na iji ngwa ọrụ ihe eji egwu anyị, ị ga-enwe ike inyocha akara okporo ụzọ. Ugbu a ị nwere ike ijide n'aka iji nnukwu ohere.
SEO analysis - Gini mere imefu ego na SEO zuru oke? Anyị na-agụnye ngwa nyocha SEO dị ike na-enweghị ụgwọ ndị ọzọ. Jiri ozi a mara ebe ị kwụ, ma jiri ya iji melite ogo njin ọchụchọ gị.
Google Analytics - Itinye aka na arụmọrụ saịtị gị bụ ikuku na mwekọta Google Analytics. Ihe omuma di nkpa nke ichoro ime ka gi mata ihe ichoro uzo WordPress gi gha agha.
Tags: jikwaa wordpressWordPress
Abụba Guy Hụrụ Coca-Cola Marketing
Onyinye Social na ndepụta nke ịchọrọ
Jenụwarị 21, 2013 na 5:00 PM
Mondaybọchị Monday ị ga-adịrị gị!
Enwere m mmasị na izu ụka ụbọchị atọ-na ịchọta ihe ụfọdụ na-agụ blog.
Olile anya na nke a n’eme gi ike di egwu ma n’enwe olile anya nke izu ike!
Ciao ciao maka ugbu a ~
PS Cheta, IZU na-eto eto na-amalite na Febrụwarị 1st na inye ego bụ nnukwu gbakwunye agbamakwụkwọ edere ede!